Muuri News Network » Wasiir kasoo Jeeda Degmada Afgooye oo ku kacay Fadeexad & dhaqan xumo yaableh..
Wasiir kasoo Jeeda Degmada Afgooye oo ku kacay Fadeexad & dhaqan xumo yaableh..
Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka DFS MD. Xuseen Osmaan Xuseen oo deegaan ahaan ka soo jeeda Degmada Afgooye ayaa ku kacay fal lid ku ah dawlad wanaaga iyo damiirka beni’aadamnimo, ka dib markii uu Lagu Eedayey inuu lunsaday gargaar isugu jiray
dawooyin iyo qalab caafimaad, kaa soo ay Dawladda Qatar ugu soo deeqday Dad weynaha Deg.Afgoye, ayadoo loo soo marsiiyey Wasiir ku xigeenka caafimaadka ee DFS. Wasiir ku xigeenka ayaa dalka Qatar u tagay hawlo shaqo oo ay DFS u igmatay, wuxuuna fursad u helay in uu magaca bulshada Afgoye ku soo qaado gar gaarkan dawo iyo qalabka caafimaad isugu jiray.
Qalabkan gargaarka ah ayaa wasiir ku xigeenka u wakiishay dad ay si aad ah isugu dhow yihiin, kuwaas oo uga iibiyey suuqyada Muqdisho Waa siday Hadalak Udhigeen Dadka Ku Eedayey.
Ka dib markii ay ka war heleen bulshada ku dhaqan deegaanka ee xaqa u lahaa dawadaas gar gaarka,
ayagoo codsanaayo in dawadaas si deg deg loo soo gaarsiiyo, ayaa wasiir ku xigeenka isku dayey in uu meer meeriyo bulshada, kana dhaadhiciyey in ay heli doonaan, taasoo qaadatay waqti dheer, dadkiina isaga quusteen.
Dadka deegaanka oo rajo weyn ka qabay balan qaadyadaas beenta ah uu wasiirka ku boojeeyey, rajadooduna noqotay mid qalashay, ayaa waxaa u soo gurmaday dhalinyaro deegaanka ka soo jeeda oo si iskaa wax u qabsi ah isu biirsaday, uguna soo deeqay gagaar isugu jira daawooyin iyo baaritaan caafimaad, waxayna noqotay mid dad weynaha aad ugu farxaan, taasoo iloowsiisay rajo beelkii ay ka qaadeen Xuseen Osmaan Xuseen. Wasiir ku xigeenka ayaa arintan u arkay mid sumcadiisa hoos u sii dhigeysa, maadaama uu qiyaano weyn ku kacay, asigoo waliba wata magaca Wasaaradda Caafimaadka, waxayna taasi dhalisay in uu dambigaas ka soo laaban waayo, wuxuuna isku dayey in uu u isticmaalo sawiradii dawo qeybinta ay lahaayeen dhalinyarada la magac baxay
UNITED GALADI (UG), wuxuuna damcay inuu u gudbiyo Hay’adda gar gaarka Dalka Qatar oo dawada ugu soo deeqday bulshada Deg.Afgoye, arintaas uu aad ugu fashilmay, ulajeedkiisuna wuxuu ahaa in uu u isticmaalo cadeyn ah inuu si sax ah u gaarsiiyey dawadii gargaarka ahaa bulshada loogu soo dhiibay. Arintaas waxay keentay in Wasiir ku xigeenka ku ceeboobo,
Xuseen Osman intaas kuma ekeyn qiyaanada, wuxuu isku dayey in uu dusha uga tuuro guddoomyaha Deg.Afgoye, asigoo ku andacooday in uu dawada ku wareejiyey Gudoomiyaha, taa soo uga gol lahaa in uu iska fogeeyo eedeymahaasi, wuxuuna isku dayey in Gudoomiyaha si hoos ah kula hadlo, arrinkana lagu xaliyo is fahan, balse
Gudoomiyaha Deg.Afgooye ayaa ka biyo diiday wuxuuna u cadeeyey in uu bulshadiisa qiyaani doonin. Ma ahan markii ugu horeeysay uu qiyaano ku sameeyo bulshada Deg.Afgooye, wuxuu balan uga baxay ergadii soo doortay oo uu u adeegsaday si qaldan, taasoo ilaa iyo hadda lacagtooda siinin dadkii masaakinnta ahaa oo aduunyadooda ka qaribay waa sida hadalka ay u dhigeen ergadaasi.
Waxayna bulshada Afgooye go’aan ku gaareen in ay dacwad ku soo oogi doonaa Xuseen Osmaan Xuseen, si loogu qabto dhibaatada uu bulshada ku haayo.
Gudiga Dabagalka Dhaqaalaha Degmada Afgooye Bile Cumar Sheekh Cadde.